यसरी भयो सल्लेरी आक्रमण ! – Himal FM 90.2 MHz
यसरी भयो सल्लेरी आक्रमण !
भिडियो स्थानीय समाचार adminhimal November 26, 2018
हिमाल एफ.एम/भानुभक्त निरौला
मंसिर १० गते । आज भन्दा १७ बर्ष अगाडी अर्थात २०५८ मंसिर १० गते मध्यराति सोलुखुम्बु सदरमुकाम सल्लेरीमा त्तकालिन विद्रोही माओबादीले आक्रमण गरेको दिन । उक्त आक्रमणमा राज्य, विद्रोही र सर्व साधारण गरि १ सय ५ जनाले ज्यान गुमाए भने करोडौँको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भयो । एक रिपोर्ट
मंसिर १० गते मध्य रातको १२ बज्न आँटेको थियो । सल्लेरी मस्त निन्द्रामा थियो । सुनसान रातमा कसलाई थाहा थियो र हामी आज मर्दै छौँ र हाम्रो घर पनि खरानी हुँदैछ भनेर । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्धि सागर त्रिपाठी पनि मस्त निन्द्रामै हुँदाहुन् । एक्कासि बन्दुक पड्कियो र अन्धकार सल्लेरी युद्ध मैदानमा परिणत भयो । अन्ततः ज्यान गुमाए प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्रिपाठीसँगै राज्य र विद्रोही दुबै पक्षका सय भन्दा बढीले ।
घटना अझै पनि झलझलि आँखैमा आउँछ प्रत्यक्षदर्शी तथा स्थानिय बासि गिर्मि शेर्पालाई ।
घटनामा ठूलो मात्रामा मानबीय र भौतिक क्षतिको सामना राज्यले गर्यो । सोलुखुम्बु जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुक्ति शेर्पाले अझै कतिपय संरचना पुर्ननिर्माण गर्न बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ ।
अझै पनि युद्धमा ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाहरु पुनःनिर्माण हुन सकेका छैनन् । मंसिर ८ गते नेकपा माओबादीले तीन वटा जिल्ला सदरमुकाम आक्रमणको योजना बनायो । ती हुन् दाङ, स्याङजा र सोलुखुम्बु । पुर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार दाङ र स्याङजामा माओबादीले आक्रमण गर्यो भने सोलुखुम्बु भने दुई दिनपछि ।
त्यतिखेर नेकपा माओबादीको पुर्वी कमाण्डको नेतृत्व मोहन बैद्यले गरेका थिए भने सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गाको नेतृत्व कुमार पौडेलले गरेका थिए । सल्लेरी आक्रमणको शैन्य कमाण्डरको जिम्मेवारी भने सन्जिबले लिएका थिए । १७ बर्ष अगाडीको घटनालाई सधैँ कोट्याईरहने हो भने कहालिलाग्दो अवास्थाको महसुस हुन्छ । यो दिनको अवसरमा दिवंगत सबै आत्माले चीर शान्ति पाओस र पुनर्निमाणको काम छिट्टै सम्पन्न होस, हाम्रो यही शुभकामना ।
खोटाङ : रावावेसीमा लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको उद्घाटन
सोलुखुम्बु : चोकर्मा क्षेत्रको पोखरी फुटेको पुष्टि
खोटाङ : पिङ खेल्दापासो लागेर एक बालकको मृत्यू